မြန်မာပြည်မှာ ဓမ္မကထိကတွေ တရားဟောခွင့် ရပြီ | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဟောခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရသော တရားဟောဓမ္မကထိကအားလုံးကို ပြန်လည်ပြီး တရားဟောခွင့်ပြုလိုက်ဖြစ်ကြောင်းကို(၂၃.၀၉.၁၂) ရက်နေ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်မောင် (၀န်ကြီးများရုံး) စာအမှတ် ၁၀၀/၃-၁၅/၀ကရ ဖြင့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း
4 Responses to မြန်မာပြည်မှာ ဓမ္မကထိကတွေ တရားဟောခွင့် ရပြီ
ကောင်းလေး on September 25, 2012 at 4:53 pm
မြန်မာ.. on September 25, 2012 at 10:05 pm
ခုမှတော့ ဘယ်ရတော့မှာပဲ.. ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုပိတ်လိုက်တဲ့ အပြစ်က..အရမ်းကို အပြစ်ကြီးသွားပြီ..
ကောင်းစားနေသေရင်လည်း.ဘဝပါပဲ..သေလျှင်တော့ ဒယ်အိုး..(အဝေစီ ငရဲ)..
ngaba on September 26, 2012 at 12:59 am
လုံးဝ ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါ။ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့နဲ့ ဘုရားရဲ့ ၀ိနည်းစည်းကမ်းတွေရဲ့ အထက်ကို ရောက်နေတာ သိပ်တော့ မသင့်တော်လှပါဘူး။ အခုထုတ်ပြန်ချက်ကလည်း မဟန အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်ရင် ပိုပြီး သဘာဝ ကြမှာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒီထုတ်ပြန်ချက်အတွက် သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ပါတယ်..
သာဓု.. သာဓု.. သာဓု…
ko yin lay on September 27, 2012 at 4:31 am
it is very good news. let’s work sayar and daker together, inorder to propagate the Buddha Sasana.
SADHU SADHU SADHU .thank you the minister of the SAsana.